Iindlela ezi-5 zokunyusa ixabiso leNdlu yakho - iBhlog yeNdawo ethengisa izindlu nomhlaba - realtyWW:
Iindlela ze5 zokuKhulisa ixabiso leNdlu yakho
EyeThupha 13, 2019 by Amelie Lawrence, Iimbono zizonke:
Abantu banokulonyusa ixabiso lamakhaya abo okanye naziphi na iipropathi zotyalo mali kungajongwanga nantoni na eyenzekayo kwintengiso xa iyonke. Unokonyusa ixabiso lekhaya lakho ngokugcina ulula. Kubalulekile ukukhumbula ukuba iindlela ezicacileyo zokuguqula inzuzo nazo zizona zininzi. Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka ucinge ngokuphucula ixabiso lekhaya lakho okanye impahla yakho ngokwenza uphuculo olusisiseko lwekhaya. Oku kunokuba yinto elula njengokuphucula inkqubo yakho yokufudumeza, ukulungisa iindonga okanye ukongeza kwigumbi lokuhlambela elongezelelweyo!
Ukufumana ixabiso lendlu yakho akunzima njengoko kunokuba kuvakala. Landela ezi ngcebiso zisisiseko ukonyusa ixabiso lendlu:
Kubalulekile kuwe ukuba iifestile zakho ezindala zitshintshwe, ngakumbi ezo zinamacangci aphindwe kabini. Oku kufuneka kukwazi ukuhlawula imali eninzi ukuze igcinwe ikhumbula ukuba izinto ezithathiweyo zikumgangatho ongcono kwaye zihambelana nomxholo wendlu yakho. Ukuba iifestile zakho zitshintshiwe kwipropathi yethutyana, unokufuna ukuzigcina kwisitayile esifanayo kwaye ungasebenzisi i-UPVC yale mihla kuyo nayiphi na indlu ebinokuthi ngeefestile zokhuni. Ngokuqinisekileyo oku kubulala ixabiso.
2. Indawo yeGadi:
Kubalulekile ukuba ujonge indlela ekhangeleka ngayo ikhaya lakho ngaphandle kuba eli lithuba lakho lokuqala lokubonakalisa umthengi kakuhle. Ingaphandle lekhaya lakho kufuneka lenze ukuba umthengi onokubakho anqwenele ukuhamba ngqo emnyango. Unokufuna ukuqinisekisa ukuba umhlaba okhoyo ngoku ulondolozwe kakuhle. Ukuba igadi yakho ibonakala ithambile kwaye imdaka ngokuthelekiswa nazo zonke ezinye igadi ezitalatweni ezingabamelwane bakho, kuya kufuneka uqwalasele ukulungisa umnyango wangaphambili okanye ukutyala iintyatyambo ezintle, ezinemibala emihle kunye nezityalo ukongeza ubuhle bayo.
Ukuba unqwenela ukulungiswa ngokutsha kwegumbi, awuyi kufumana enye indlela ebhetele kunomsebenzi wokupeyinta ophumelelayo ngokwemali kunye nangexesha. Ungonga imali eninzi ukuba uzenzela ngokwakho, kodwa ukuba awunabo ubuchule obufunekayo okanye ixesha, unokuhlala ufumana iingcali ngaphakathi.
Ngelixa indlu yakho ilungiswa, kufuneka uthathe isigqibo ngemibala. Ukuba unqwenela ukonyusa ukuthengiswa kwekhaya lakho, kungcono ukuba uyidlala ngokukhuselekileyo ngokuthatha isigqibo ngombala ozolileyo, ongathathi cala wee-beiges, amalahle, abelungu okanye abamhlophe, gcina engqondweni ukuba imibala elula yenza ukukhanya ukukhohlisa kwendawo. Bakwavumela abathengi abaza kubakho ukuba bazicingele ngokwabo kwisithuba.
4. Umquba oManzi:
Ukuba ikhaphethi yakho eqinileyo ifuna ukutshintshwa, kufuneka uthathele ingqalelo ukufakela umgangatho wokhuni okanye umgangatho ophathwayo phantsi. Abathengi bahlala bathanda ukhuni olomeleleyo ngaphezulu kwekapeti kwaye ngokomlinganiso, ukuqinelwa kwemigangatho yokhuni olunzima kunye neetayile eneneni kunokuba nengeniso kangangezihlandlo ezi-5-6 zotyalo mali lwangaphambili.
5. Phucula ikhitshi lakho:
Ngokutsho kweengcali ezininzi, ukunyusa ikhitshi kunceda ukuba ufumane eyona mbuyekezo inkulu. Unokwenza uvuseko oluncinci lwekhitshi lakho ngokulungiswa kwakhona. Unokupeyinta iikhabhathi zakho ngogqibezela iinkuni. Iithayile ezintsha nazo zingayinto entshintsho entsha ekhitshini lakho. Guqula izixhobo zakho zasekhitshini kanye xa zinxiba kwaye zithathe izigqibo ngenkangeleko yentsimbi efanayo.
Ngethemba lokuba, ezi ngcebiso ziya kukunceda uthathe isigqibo sokuba zeziphi iiprojekthi zokuphucula ikhaya onokutyala kuzo ukuthengisa kwakho.
Amelie Lawrence Agasti 13, 2019
Olu ngeno yafakwa kwi Ukuphucula iKhaya noqhotyosho Ixabiso leNdlu. Bookmark le Permalink.
Oktobha 10, 2016 Kutheni le nto ukhetha iiFlash Glazed yeWindows Uninzi lwabanini bamakhaya banamava amakhulu ezibonelelo zokuthuthuzela kunye nokusebenza kakuhle ngoncedo lwefestile ekhanyayo ephindwe kabini. Ngokuqinisekileyo kukho izibonelelo zebhetri zamandla asezantsi kodwa kwelinye icala unezibonelelo zokonyusa ixabiso lekhaya lakho kunye nezinto zentuthuzelo ezongeza kakhulu kwinkalo yezibonelelo zokuphuculwa kwekhaya lakho. Xa ucinga ngokuthenga iifestile eziqaqambe kabini ngokuqinisekileyo uya kufumana okuninzi kwimarike, kodwa kuya kufuneka ujonge ubungqina babo bokuvakalayo […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Matshi 19, 2017 Izibonelelo ze-Argon-gesi-Egcwalisiweyo yeWindows Ngelixa leargon legesi lizele iifestile sithetha ngeefestile ezinephaneli ephindwe kabini kunye nearon. Oku kuza ngohlobo lweyunithi evaliweyo kwaye ezi windows zisebenza kakuhle ikakhulu xa kuziwa ekwandiseni ukusebenza kwamandla. Iipaneli zenziwe kwiglasi elula kwaye ezi zenzelwe ukukhusela kunye nokulondoloza igesi ezaliswe phakathi kwazo. I-Argon yirhasi ye-inert kwaye ayibizi kakhulu, kutheni le nto iifestile zinoqoqosho ngokwenene. I-Argon yirhasi yokufaka kwaye [] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Agasti 16, 2017 Yonyusa ixabiso lekhaya lakho ngokuFudumala okusebenzayo Esi sizukulwana sikhoyo sigcwalisiwe nabantu abashukunyiswa kuphela kukufumana imali. Ngesi sizathu ke, iinkampani zihlala zibiza amaxabiso abantu ngokubanzi ngokufumana izinto eziyimfuneko ngokwenene; kumnini ophakathi wendlu, izinto ezinjengamanzi, umbane kunye nokufudumeza kunokwenza i-dents heds kwiakhawunti yakho yebhanki inyanga nenyanga. Ngoku, ukufumana indlela esebenzayo ngakumbi yokugcina ubushushu endlwini yakho akunakubeka uncumo ebusweni bakho kuphela […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Februwari 23, 2018 Ukuphuculwa kwekhaya okongeza ixabiso kwiPropathi yakho Ukuba indawo yentengiso yezindlu ithe tyaba, indlela kuphela onokuthi ikwazi ukunyusa ileli yepropathi kwithuba elifutshane kukonyusa ixabiso lepropathi yakho yangoku. Nangona yonke into ukusuka kulungisa iingxaki zesakhiwo ukuya kuqinisekisa ukuba ukufudumeza okuphakathi kuhamba kakuhle kuya kuqinisekisa ukuba unokuyalela ixabiso elifanelekileyo lokubuza, sijonge ukuphucuka okunokwenzeka kokwenza umahluko omkhulu kumgca wakho ongezantsi. Isifundo esenziwe yiOfisi ye […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya, Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba, Yard kunye neGadi, Ukuthengisa izindlu nomhlaba
Septemba 10, 2018 Iimpawu ezi-5 zokuba Lixesha lokuba iifestile zakho zitshintshwe IiWindows zizinto eziyimfuneko endlwini. Oku kukhuthaza ukusebenza kwamandla, ukuphucula ukubhenela, kunye nokuvumela umoya ukuba ungene ngaphakathi nangaphandle kwendlu. Njengezinye izinto, iiwindows nazo zinobomi obuluncedo. Kukho ixesha lokutshintsha iifestile zakho kodwa kuya kufuneka uqonde xa. Ngeefestile ezintsha, uya kukonwabela ukusebenza kakuhle kwamandla kunye nokuhlawula amatyala asezantsi phakathi kwezinye izibonelelo. Unikwe imiqondiso emi-5 yokuba lixesha lokuba iifestile zakho zitshintshwe. Ikhredithi yomfanekiso: noremacwindows.com.au Ukutshintsha […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya